Number of points for each post: 80 (ပို့စ်တခုအတွက် ၈၀ ပွိုင့်)
Number of points for “daily” login: 2၀ ( နေ့စဉ် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့ ခြင်းအတွက် တရက် ၂၀ ပွိုင့်)
ယ္ခု သီတင်းပတ်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် မှတ်သားဖွယ်သတင်းများ ကဏ္ဍကို ယခု တပတ် (၂၈.၆.၂၀၁၁-၅.၇.၂၀၁၁) ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အဆင်မပြေမှုများကို တောင်းပန်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းလင့်များကို
eros အသည်းကွဲနေပါသဖြင့် သတင်းမတင်နိုင်သေးပါကြောင်း
history of 2000 donation group post ကိုဝင်လို့မရပါဘူးရှင် internal server error ဆို ပြီးပြနေပါတယ် ။ကျန် ပိုစ်များဝင်လို့ရပါတယ် . ရွာသားများစစ်ကြည့်ပေးပါဦး
စာလေးတစ်ကြောင်းေ၇းလိုက် ပုံလေးတွေတင်လိုက်ရယ် ပုံတွေအများကြီးတစ်ခါတည်းတင်ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုတင်ရမလဲပြောပြပါ
ဓါတ်ပုံတင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ ၂ရက်ရှိပြီ
သူကြီးရေ Gate Pass ပါမှ ရွာထဲဝင်လို့ရတယ်။
စာချည်းပဲပါတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုတင်တာ စာအပြည့်အစုံပါမလာဘူး
ပန်ပန် လိုပဲ ကျွန်တော်လည်းခဏ ခဏဖြစ်တယ်။ မနေ့ကတင်တဲ့ပိုစ့်တောင် အဲဒီလိုဖြစ်လို့ ပြန်လုပ်လိုက်ရသေးတယ်။ ကျွန်တော်ဆို တစ်ခါတစ်ခါ ခေါင်းစဉ်ပဲပေါ်တယ်။ စာလုံးဝမပေါ်ဘူး။
အမာခံ တိုက်စစ်မှူး Etone နဲ့ ဆူး အပြင် အခြား လူတွေဝန်းရံလိုက်တာ သဂျီးရွာ အတော်လှလာပါလား ။ ဟိုတလောကတော့ ဘာတွေလဲမသိ ၀င်ရောက်သောင်းကျန်းတာ တကယ်ရေးနေတဲ့လူတွေမပြောနဲ့ ကိုကမရေးတတ်တဲ့လူတောင် ဖတ်ရတာတင်စိတ်ညစ်ရော ။
ဒါနဲ့ သဂျီးက ဘယ်ဘာသာကနေ ပြောင်းလာတာလဲ သိပါရစေ ။ ကိုကြောင်ကြီးပြောနေတာ မစောင့်နိုင်တော့လို့
နေရာရွေ့ နေပါသဖြင့် အခက်အခဲရှိပါက တောင်းပန်ပါသည်ခင်ဗျား..
သြော်ဒါကြောင့်ကိုး ၀င်ရတာပါ ခက်နေတယ်။
ဒါကြောင့်ကိုး ဒီမှာ တင်မရဖြစ်နေတာရယ်… တင်ပြီးသားပြန်ကြည့်တာ ပုံမပါတာရယ်….. ။ :angry: မနက်မိုးလင်းကတည်းက တင်နေတာ မရဘူး … မရလို့ ဖြစ်မလား ရရမယ်ဆိုပြီး တင်နေတာ … အခုထိပဲ ။ မောလိုက်တာ
29.6.2011 မြန်မာစံတော်ချိန် ၇ နာရီခန့် တွင် ရွာထဲ သို့ ဝင်ရန် လိပ်စာ ရိုက်ထည့်လိုက်သော်လည်း ပြလာသည် မှာ
ပထမ ဆုံး ကွန်မင့် ပေးရင် ၁၅ မရတော့ဘူး ဗျို့ ။ ၁၀ ပဲ ရတော့တယ် ဗျို့ 
အခုတင်မှ ၀င်လို့ရသွားတာ။ ဆာဗာပြောင်းနေလို့ဖြစ်မှာပါ။
ပိုစ်ထဲ လာမန်းတယ် ဆိုရင် အရင်က ပွိုင့် ၅ ရတယ် အခု မရတော့ဘူး။
အင်မတန်တော်ပြီးဥာဏ်သွားလိုက်တဲ့သူကြီး၊ ဘယ်ရမလဲ comment 15ကျပ်ပေးတုန်း ခါတော်မှီ မန့်လိုက်တာ တညတည်းတော် ပွိုင့်တွေ ရလိုက်တယ်။
သူကြီးထက် ပိုဥာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေ ရွာထဲမှာ အများကြီးနော် …
ကွန်မန့်တစ်ခုတက်လာတိုင်း ပို့စ်ပိုင်ရှင်က ၅ မှတ်ရတာကိုတော့ ကြိုက်တယ် … အဲဒါမှ ပို့စ်ကောင်းကောင်းရေးချင်စိတ်ပေါက်လာမှာ ..
အဘပုဘာလုပ်လိုက် ပြန်ပြီဒုံး ။
ဒီနေ့ သတိထားမိတာ တခု ရှိပါတယ်။
သဂျီးရေ ပိုစ့် တစ်ခုမှာ ကွန်မန့်တွေက နှစ်ခုကွဲနေပါတယ် အဲတာ ဘာဖြစ်တာလဲ မသိဘူး ကြည့်ပေးပါဦး
လွဲတော့ လွဲတာပေါ့ ပိုစ်တင် မဟုတ်ပါဘူး ပိုစ်တော်တော် များများ ဖြစ်နေတာ သတိထားမိပါတယ်။ လွဲတော့ လွဲတယ် ဆိုတဲ့ ပိုစ်ကို စမြင်ခါစ မို့ အသံပေးမိတာ.. ဒီနေ့ ပိုစ်တွေ တော်တော် များများ အဲလို ဖြစ်နေတာပါ။
ဘယ်လိုကွဲနေသလည်းမသိ.. သွားကြည့်တော့… ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်..။
၀င်ကြည့်တဲ့ နေရာ ကွဲရင် ကွန်မန်း ပေါ်တဲ့ ပုံစံ မတူဘူး။
browser ရဲ့ cache ထဲကနေ ထုတ်ပေးရတဲ့ အခါမျိုးမှာ update မဖြစ်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ web- caching server ( ဥပမာ – ISA လိုမျိုး) တွေ ကနေတဆင့် ဖြတ်ထွက်ရတာ ဆိုရင်လဲ cache ထဲက ထုတ်ပေးတာမို့ အဲသလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ offline website data တွေ clear လုပ်ပြီး ပြန်ခေါ်ကြည့်ရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
ဆူး ဖြစ်တာ browser ၂ခု ခွဲကြည့်လို့ ဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူး တခုတည်းမှာကို tab တွေ ခွဲပြီး ဖွင့်ထားရင်းကို အဲလို ဖြစ်တာ.. window တခုတည်းမှာကို ဖြစ်တာနော်..
Post တွေက IE နဲ့ ဖွင့်ကြည့်တော့တစ်မျိုး Mozilla နဲ့ကျတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်
သူကြီး အိတုံ ရဲ့ မြွေအရေခွံခွာတဲ့ ပို့စ်က Home က၀င်ပြီးကြည့်ရင် စာ၊ပုံ မြင်ရတယ် Comments by Post အောက် ၀င်ကြည့်ရင် ပို့စ်ထဲရောက် စာ၊ပုံ ဘာမှမပေါ်ဘူး
အော် ဒီရွာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကြီးမင်း မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေလိုပါဘဲလား ……….
ဦးကြောင်ကြီးက mdyleaks အတွက် ၀င်ဖတ်သူတွေကို ၁၀၀ပွိုင့်တိုးပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်
ပန်ပန် ဒီတိုင်း မရဘူး.. လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အဆင့်တွေ ရှိတယ်။ ပိုစ် တခု ထောင် မရသေးကြောင်း အတိ အလင်း ကြေညာ.. ထပ်တူ ထပ်မျှ မရသေးတဲ့ ရွာသားတွေ ၀ိုင်းပြီး ထောက်ခံ အဲလို မျိုးနဲ့ ပေးမှာ ပန်ပန်ရဲ့.. ပေးတာတော့ တကယ်ပေးမှာ..
ဘာမှတောင်လုပ်စရာ မလိုဘူး (ကိုကြောင်ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး)သူကြီးက ကျွန်တော့် ပွိုင့်ကိုတော့ ၁၀၀ တိုးပေးထားပါလား နည်းလမ်းတော့ နဲနဲကွာမယ်ထင်တယ်
သူကြီး ကျွန်တော်တင်ထားတဲ. MG စတင်ထုတ်ဝေတဲ.နေ.
သူကြီး ခင်ဗျာ ။ ။
သဂျီးရေ မနက်ကတင်ထားတဲပ ပိုစ်ရော ကွန်မန့်တွေရော ပျောက်နေပါတယ် မနက်က 12း00 နာရီလောက်ထိ၇ှိနေပြီး အခု တစ်ခ့ပြန်ဖွင့်တော့ ပျောက်နေပါတယ် …
သဂျီး ကွန်မန်း ပျောက်တဲ့ ကိစ္စ အီးမေး နဲ့ ပို့ပြီး တိုင်ကြားထားပါတယ်။
အီးရိုးသည် ပေါင်ပေါ်က ပိတ်စ ကြွက်ကိုက်ခံရလို့ နတ္တိ မရှိဖြစ်နေသဖြင့် ရွာထဲကို လည်ပတ်ရန် လုံးဝ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းကြားသိရပါသည်။
အဲ့ဒီပို့စ်ကို အက်ဒစ်ပြန်လုပ်ပြီး comment off ဆိုတဲ့ အောက်ဆုံးကဟာလေးကို ကလစ်ခြစ်ပေးလျှင် ရပါတယ်…
တင်ထားသော လူကြီးသူငယ်နာ ပိုစ့် ပျောက်နေပါသည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း save လုပ်မထားရသေးပါ၍ ပြန်လိုချင်ပါသည်။ ကိုယ့်ပိုစ့်ထဲမှာ ပြန်ရှာတာလည်း မတွေ့ပါ။
စာပျောက်နေသူတွေ.. မန်းတာပျောက်နေသူတွေ… http://MandalayGazette.org မှာ ပြန်ရှာကူးတင်ကြပါနော..။
ပုံတွေ..နောက်နေ့မှ ပြောင်းနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..။ စိတ်မပူကြပါနဲ့..ပုံတွေအားလုံးရှိပါတယ်..။
၀က်ဆိုက်ကိုအလေးအပင်လျှော့အောင် .. ပုံတွေကို ရွာထဲဒါရိုက်မတင်ပဲ.. တခြား ပုံအလကားပေးတင်တဲ့နေရာမှာတင်.. ရွာထဲမှာ လင့်ခ်ပဲလှမ်းပြတာမျိုးဖြစ်အောင်… ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုတင်ကြရသလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရသလည်း.. သိသူတွေ ပြောပြပေးကြပါဦး..။
ဆူး ကတော့ ဖေ့ဘွတ် နဲ့ ပီကာဆာ ကို သုံးတယ်။
သဂျီးရေ အခုကျတော့လည်း ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ပို့စ်မှာ မန်းထားကြပေမဲ့ မေးလ်ထဲ မ၀င်ဘူး … အဲ့ဒီတော့ ဘယ်သိပါ့မလဲ … ။ မျက်လှည့်တွေချည်းပြနေတယ် စတေဘယ်လ်ကို မဖြစ် နိုင်ဘူး ။
ခုလေးတင် ပြန်ဝင်ပါတယ် … အီးမေးလ်ဝင်ပေမဲ့ ပို့စ်ပေါ်ရောက်ပြီး ကြာတာတောင် delay ဖြစ်နေတယ်နော် ။
ဟိုတစ်လောက အရမ်းပွဲဆူ ခဲ့တဲ့ ဦးခင်မောင်ချို့ ရဲ့ ကလေး ဆိုတာ 2.7.2011 က ဆုံးသွားပြီ လို့ သိရပါတယ် ။ နောက်ပြီး အဲဒီကလေးဟာ ဦးခင်မောင်ချို ရဲ့တူလေးပါတဲ့ ။ သား မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ။ အသုဘ လိုက်ပို့ ခဲ့သူ ကို မေးကြည့်ရာမှာ ဘာရောဂါ နဲ့ ဆုံးတာလဲ ဆိုတော့ အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်တုန်းက ရခဲ့တဲ့ ဒဏ် နဲ့ ပဲ လို့ သိရပါတယ် ။ သတင်းအတိအကျ သိရှိသူများရှိရင် တင်ပေးကြပါဦးလို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော် ။ ကျွန်တော် အခုရေးလိုက်တာ က ပြည့်စုံမှု မရှိတဲ့ အတွက် သည်းခံ ပေးကြပါ
သဂျီးရှင့် Social protection for Immigrant workers ပတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတ စုံသောရွာသူရွာသားများမို့ သိသလောက် ဆွေးနွေးပေးပါ ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ပိုစ်ကို ဖိုရမ်မှာတင်ထားပါတယ် ။ အားလုံးသိအောင်ဘာလုပ်ရမလဲ ရှင့် ဖိုရမ်က ကိုတောင်သိတ်မ၀င်တတ်လို့ပါ ။
သဂျီးရေ- တချို့မန်ဘာတွေ site ကို ဖွင့်ဖတ်လို့တော့ရတယ်။ sign in ဝင်မရဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဘာဖြစ်မှန်းလဲ မသိ။ ကော်နက်ရှင်ရပြီး ဝင်မရတာမို့ မန်ဘာကို block လုပ်ထားတာများလား သိချင်နေပါတယ်။
မမရေ ကျေးဇူးပါ . ဒီ ပိုစ် ဘယ်သွား ရှာ ရမှန် မသိဘူးဖြစ်နေတုန်း တက်လာလို့ ။
“စာမူတခုအတွက်အနည်းဆုံးရေးရမဲ့ စာလုံးအရေအတွက်ကိုလည်း ၃၀၀၀ ကနေ ၁၅၀၀ ကိုလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ စာလုံးရေကို သတိပြုကြစေလိုပါတယ်။ အလွန်အမင်းတိုသော စာမူများ မတင်သင့်ပါ။”
သူကြီးခင်ဗျား .. မတင်သင့်ပါ ဆိုသည်မှာ တင်ချင်လျှင်တော့ ရပါသည် ဟု မှတ်ယူ ရမလားခင်ဗျာ။
မေးပါရစေ သဂျီးရေ …
သဂျီးဆာဗာ ပိုးကိုက်နေပြီ။ ၇၅၀ ဒီဂရီ ကျွက်ကျွက်ဆူနေတဲ့ ရေနွေးအိုးထဲကို ဆာဗာထဲက ကလီစာတွေဖြုတ်ပြီး ဆယ်နာရီကြာအောင် စိမ်ထားရမယ်။ virtual ဆာဗာဆိုရင်တော့ ဆာဗာကုမ္မဏီကို ရေနွေးအိုးမသွားပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ ရမယ်။ သူတို့ကို မခိုင်းနဲ့၊ ငပျင်းတွေ လုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီနေ့ အမေကြီးကားမှာ ကျေးဇူးတော်နေ့ တဲ့ သူကြီးတို့ ကိုကြောင်ကြီးတို့ အားလပ်ရက် ရပြီး ဘာတွေ လုပ်နေလဲ
အတော်ပဲ၊ ကျနော်လည်း ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းမှာ ကျေးဇူးတော်နေ့နဲ့ ဆိုင်တာတွေ့လို့ သဂျီးကို ကလိမလို့ မန်းမလို့ နေရာရှာနေတာ။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်။
ကျေးဇူးတော်နေ့ ယူအက်စ်နေသူများ ဘာလုပ်သလဲဆိုတော့ အားလပ်ရက် ထုံးစံအတိုင်း စုံတွဲများက ဟိုဒင်းလုပ်ပြီး အတွဲမရှိသူများက ဟိုဟာလုပ်ပါတယ်။ နားမလည်လဲ သဘောပေါက်သလိုသာ တွေးကြည့်တော့ဗျာ။ သဂျီးကတော့ ယဲ့ယဲ့ပဲကျန်တော့တယ်။ ကွန်ပြူတာ ကီးဘုတ်တောင် မနှိပ်နိုင်တော့ဘူး ပြောသံကြားတယ်။ သဂျီးရေ ကြက်ဥနဲ့ပျားရည်သောက်၊ သိပ်လည်းမကဲနဲ့၊ နယူးရီးယားအတွက် ချန်ထားအုံး။။။။
ကြက်ဆင်ခြင်းတူပေမဲ့ ကံခြင်းမတူဘူး သဂျီးရေ…
ဦးကြောင်တော့ ဘာလုပ်နေတယ် မသိဘူး
သမ္မတဂျီးက ကြက်ဆင်တွေ လွတ်ပေးတော့
သူကြီးခင်ဗျာ တရုတ်ကနေ MG ထဲကို လိုဏ်ဂေါင်း ဖောက်ဝင်နေရတယ်ဗျ။ ရိုးရိုးဝင်လို့ မရတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ခင်ဗျာ။ ကောနက်ရှင် မကောင်းလို့ လား။ တခြား site တွေတော့ ချက်ခြင်းတက်တယ်။
တရုတ်က MG ကို Mafia Group ထင်လို့ ဘန်းထားလို့ပါကွယ်
Comments တွေအများကြီးရထားတဲ့ ပို့စ်အတွင်းမှာ ကျုပ်မပါဘူးဆိုရင်